एक्ससीएमजीले ल्यायो २२ टनको नयाँ एक्स्काभेटर नेपाली बजारमा |
एक्ससीएमजीले ल्यायो २२ टनको नयाँ एक्स्काभेटर नेपाली बजारमा
काठमाडौं । विश्वकै छैटौं ठूलो निर्माण उपकरण बनाउने चीनको नं. १ कम्पनी एक्ससीएमजीले नयाँ एक्स्काभेटर नेपाल भित्र्याएको छ। नेपालका लागि कम्पनीको एक मात्रै आधिकारिक बिक्रेता आईडीएमसीले नयाँ २२ टनको एक्स्काभेटर भित्र्याएको हो।
कम्पनीले यही अक्टोबर १८ मा सोल्टी होटलमा एक्स.इ. २१५ सी एक्साभेटर लन्च गरेको हो। मुख्य कार्यालय ललितपुरको भनिमण्डलमा रहेको कम्पनीले नेपाल अधिराज्यभर ६ वटा शाखा कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ। एक्काइस हजार नौ सय अपरेटिङ वेट रहेको यो एक्साभेटरमा इसुजुको आयातित इन्जिन जडान गरिएको छ।
यो इन्जिन १७२ हर्सपावर क्षमताको रहेको छ । साथै, एक्स.इ. २१५ सी एक्साभेटरमा मेकानिकल पप्प, कावासाकी हाइड्रोलिक सिस्टम, ५।६८ मिटरको बुम तथा २.९१ मिटरको आर्म रहेको छ। यो एक्स्काभेटर बढी शक्तिशाली र कम इन्धन खपत गर्ने कम्पनीको भनाइ छ।
यसले ह्वील लोडर, एक्स्काभेटर, ग्रेडर, रोलर, क्रेन, पाइलिङ मेसिन, बोरिङ मेशिन जस्ता थुप्रै निर्माण उपकरणहरु उत्पादन गर्दै आएको छ।
होन्डाको ‘डियो डिएलएक्स’ नेपाली बजारमा, यस्तो छ फिचर्स र मूल्य